musha nyika dzakabatana Comedians Chris Rock Childhood Nhau Plus Untold Biography Chokwadi
Yedu Chris Rock Biography inokuudza Chokwadi nezve rake rehucheche Nyaya, Hupenyu hwepakutanga, Vabereki, Mhuri, Ex Wife, Musikana Musikana, Mararamiro, Net Kukosha uye Hupenyu Hwega.
Muchidimbu, ichi Chinyorwa cheHupenyu cheiye mutambi weAmerica. Isu tinotanga kubva pamazuva ake ehudiki, kusvika paakatanga kuve nemukurumbira. Kuti uve nehupenyu hwako hwekuda kudya, heuno hudiki hwake kune vakuru gallery - chidimbu chakakwana cheChris Rock's Bio.
Hupenyu hwepakutanga hwaChris Rock uye Kumuka. Tarira pfupiso yeHupenyu Hwake Hupenyu.
Izvi hazvitauri kuti Chris Rock akaisa kunyemwerera pachiso chevanhu vazhinji. Hwake hunhu hunhu mumabhaisikopo uye kusimuka-kuma comedies akasiya fungidziro isingaperi mupfungwa dzevateveri vake. Sezvineiwo, Chris akavhoterwa sa Yechishanu-Mukurusa-Mira-Up Comedian muvhoti yakarongedzwa naCentral Central.
Chris Rock's inozivikanwa movie kurondedzera - Wese Anovenga Chris - akasiya vanhu vavhiringidzika nekuda kuziva kwakanyanya nezve ruzivo rwake rwehudiki. Nekudaro, isu takaisa pamwechete inoshamisa Hupenyu Hupenyu Nyaya yaChris Rock kutanga kubva kune Hake Hupenyu hwePakutanga kusvika paanowana Mukurumbira. Pasina zvakawanda ado, ngatitangei nenyaya yake yehucheche.
Nhau yaChris Rock Yehucheche.
Mufananidzo wechidiki weChristian Rock.
Kutanga kubva, Christopher Julius Dombo akaberekwa pazuva rechinomwe raFebruary 7 kuna amai vake Rosalie Rock uye baba vake, Julius Rock muAndrews, South Carolina. Chris ndemumwe wevana vazhinji vakaberekerwa mumubatanidzwa pakati paamai vake, mudzidzisi wepachikoro, uye baba vake, mununuri wepepanhau anoratidzwa pazasi.
Mufananidzo unokanda wevabereki vaChris Rock, Rosalie Rock naJulius Rock.
Kunge Morgan Freeman, Chris Rock akapedza mazuva ekutanga ehudiki hwake achifamba kubva kune imwe nzvimbo kuenda kune imwe. Paakaberekwa, vabereki vaChris vakatamira kunogara kuCrown Heights uye mushure mezvo vakatamira kunogara kuBrooklyn, New York. Hupenyu hwaive hwakanyanya kunetsa kumhuri yemuAmerican comedian.
Kuitira kuzadzikisa zvido zvemhuri yavo, amai vaChris vakatora rimwe basa rekuwedzera uye vakashanda semushandi wezvemagariro kune vakaremara pfungwa. Chokwadi, kurera vana vasere zvaive zvakaoma kuita. Nekudaro, vabereki vaChris vakanyora kubudirira mukurera vana vavo vakawanda.
Mhuri yaChris Rock Kubva:
Zvinoenderana neongororo yeDNA yakaitwa paChris 'Ethnicity, hunhu hwake Ancestry inoumbwa ne80% Sub-Saharan Africa uye 20% yeEurope. Ndosaka muviri wake muviri uchiratidza humbowo husingadziviriki hwemhuri yake Midzi.
Kutarisisa mumutsara wedzinza rake kunoratidza kuti sekuru-sekuru vaChris Julius Caesar Tingman akashanda seimbove muranda neUS panguva yeHondo yavo yeVanhu. Chimwe chinonakidza pamusoro peChris Mhuri Kubva ndechekuti vanasekuru vake vanogara zvakanyanya kuNorth Carolina.
Nhoroondo Yemhuri yaChris Rock:
Wechidiki weAmerica akazvarwa mumhuri yepakati-yemhuri kumashure. Nekudaro, vabereki vake vakakwanisa kumupa izvo zvinodikanwa zvehupenyu. Zvinoita pasina kutaura kuti mhuri yaChris yaidanana uye yaigara ichikurudzirana mune zvese zvehupenyu hwavo.
Hazvishamisi, iye uye vatatu vevanin'ina vake vese vakapinda mumutsara wakafanana webasa rehunyanzvi. Pasina kupokana, Chris 'Mhuri Yemashure yakakanganisa zvakanyanya hunhu hwake. Nekudaro, pfungwa yake yekuseka uye danho rekuzvininipisa chibereko chekudzidziswa kwake kwemba.
Kukura kwaChris Rock Mazuva:
Kufanana nezvinoonekwa mumutambo wenguva dzose wevana, wechidiki weAmerica aive neruzivo rwakanaka mumazuva ake ekukura. Unoziva?… Chris akakurira munharaunda yaigara yakazara varungu. Nekuda kweizvozvo, aigara achimanikidzwa uye achishungurudzwa nevamwe vana vachena nekuda kweganda rake reganda.
Dzidzo yaChris Rock Uye Basa Kuvaka:
Nehurombo, mukomana mudiki akatadza kupedza High School nekuda kwekusarudzika. Paaive achiri kuyaruka, Chris akaenda kuJames Madison High School iyo yaive nevazhinji vachena vadzidzisi. Ikoko, akatambura nekutevedzana kwekushungurudzwa uye Kurova kubva kuvadzidzi vachena.
Chris zvaakakura muchikoro, ndozvakaitawo kudheerera kwakawedzera. Nekufamba kwenguva, vabereki vake vakamubvisa paMadison High School ndokumuendesa kune chimwe chikoro. Zvisinei, Chris akasiya chikoro chesekondari asina kana chivimbo chekudzoka kuchikoro. Zvisineyi, akazoenderera mberi akawana GED.
Hupenyu hwaChris Rock Hwekutanga Hupenyu:
Mushure mekusiira chikoro panzira, mutengesi weAmerica akatora mabasa akati wandei kuita mapaundi mashoma. Akamboshanda kumaresitoreni akakurumidza-ezvekudya zvekare mumazuva. Yakanga iri panguva ino yekuchenesa yehupenyu hwake apo Chris akafunga kufambisa firimu mukutamba.
Mudiki weAmerica akaita mabasa akati wandei mushure mekusiya chikoro.
Pazera ramakore 19, munhu mutema wekuAmerica akange atanga kuita komiki-yekuseka. SaNick Cannon uye Kevin Hart, Chris haana kunyora kubudirira kukuru pakutanga kwezita rake rekuseka. Nekudaro, mutambi ane tarisiro uye anouya haana kurasikirwa nemoyo.
Mugwagwa waChris Rock Kuenda Mukurumbira Nhau:
Nematariro akakwirira, Chris akaenderera mberi nekuita mune mamwe miratidziro zhinji uye akatanga zvishoma nezvishoma kukurumbira. Panguva ino, vanhu vazhinji munharaunda yake vaive vatanga kuda charisma yake. Neraki, ivo vatema veAmerican vakatora nzvimbo nyore mufirimu Ndiri kukubudirira iwe pamwe chete neiyo TV teki Miami Vice.
Ona kuti mutambi wedu wekare akatarira kumashure sei pakutanga kwebasa rake rekuita.
Isiri nguva refu mushure mekunakidzwa nekubuda pachena kubva mumabasa ake ekuita, Chris akasangana naEdie Murphy mukirabhu yemanheru. Pasina nguva iri kure, Eddie akave mumwe weshamwari dzake dzepedyo uye akatomboenda kunomuperekedza. Pasi pekurairirwa naEddie, Chris akawana rake rekutanga basa guru mufirimu Beverly Hills Cop II.
Chris Rock Kumuka Kune Mukurumbira Nhau:
Hupenyu Hupenyu hwaChris anogona kunge asina kutora nzira iripo kana isiri yaEddie Murphy. Nekudaro, iyo mota hombe yakamuendesa muchiedza cheFame hachisi chinhu asi kutsunga kwake uye kushingairira kuwana budiriro kuburikidza nekuseka.
Mushure mekuonekwa kakawanda mumafirimu akasiyana akakurumbira, Chris like Nick Cannon vakawana kuzivikanwa pasi rose uye kutsigirwa sevatambi vakasimbiswa. Kubva paakasimukira Mukurumbira, Chris akahwina anopfuura mana maEmmy Awards, matatu maGrammy Awards, uye maviri maAward Awards.
Iyo Black American inogamuchira Emmy Mubairo wekunyora mimhanzi yakanaka.
Kunyangwe kusvika ikozvino, iyo tarenda yeAmerican comedian zvakadaro Dave Chappelle, vakamisa zita rake pakati pezvinyorwa zve Wepamusoro makumi maviri anonakidza Emira-Up Comedians yeAnguva Ino. Vamwe vose, sezvavanotaura, inhoroondo.
Hukama hwaChris Rock Hupenyu Hupenyu Chokwadi: Shamwari dzevasikana, Wife, uye Vana:
Muzvakawanda sekuita kwaChris zvakanyanya muhupenyu hwake hweKutarisira, kazhinji akatsvaga rudo senge munhu wese wese. Chokwadi ndechekuti, kusarurana kwerudzi kwakatarisana neyeAmerican celeb kwakanyatsokonzeresa kuda kwake rudo. Kunyangwe hazvo dzakaoma sei ndangariro dzake dzakapfuura, Chris akakurumidza kuwana rudo.
MuAmerican comedian akatanga kudanana naMalaak Compton-Rock, muvambi nemutungamiriri mukuru weStainWorks. Shiri-dzerudo dzakadanana kwenguva uye munguva pfupi dzakatora hukama hwadzo kuzinga nyowani. Nekudaro, musi wa 23 waNovember 1996, Chris naMalaak vakasunga banga uye vakave murume nemukadzi.
Tarisa uongorore Chris Rock uye mukadzi wake akanaka, Malaak Compton-Rock.
Mushure mekuroora kwavo, vaviri vacho vaikoshesana uye vairemekedza hupenyu hwavo hwebasa. Zvisinei, rudo rwavakambogoverana rwakakurumidza kurasikirwa nechiedza. Naizvozvo, muna 2014 vaviri vacho vakamhan'arira kurambana chikumbiro. Zvakatora dare makore maviri kuti apedze kurambana. Nekudaro vaviri vacho vakaenda munzira dzakasiyana mushure.
Vana vaChris Rock:
Kunyangwe Chris nemukadzi wake vakarambana, vaizogara vakabatana nerudo rwavanarwo kuvana vavo vaviri zvinoti; Lola Simone naZahra Savannah. Kusvika parizvino, Chris anogara achipa vanasikana vake zvavanoda.
Shamwari dzaChris Rock:
Zvinoshamisa kuti, Chris akabvuma kusavimbika kumhiko yake yemuchato panguva yekurambana pakati pake nemukadzi wake. Iwe unoziva here kuti anonzi aifungidzirwa kunge akambodanana naKarrine Steffans muna 2005? Uyezve, Chris akasangana kwenguva pfupi naMegalyn Echikunwoke mu2015. Pazasi pane mufananidzo wevakadzi vaviri vakatora moyo waChris Rock padivi pemukadzi wake.
Akave nehukama muhukama naKarrine Steffans (R) naMegalyn Echikunwoke (L).
Hupenyu Hwemhuri hwaChris Rock Chokwadi:
Mukutarisana nekushoropodzwa, Mhuri yaChris yakamira yakasimba senhovo kwaari. Nekudaro, isu takanyora chidimbu cheruzivo rwakadzama nezve nhengo yese yemhuri yake. Verenga paunenge uchitaura zvakawanda nezve Hupenyu hweMhuri hwaChris Rock kutanga naamai vake.
Nezve amai vaChris Rock:
Kuedza kwaamai vaChris, Rosalie Rock, kwakatamba chikamu chakakosha mukumununura kubva kune vakawanda vanodheerera kumashure mumazuva ake ehudiki. Chii chingave chinonyaradza kupfuura kumbundira uye kunovimbisa kwaamai vake mushure mekuita nguva yekurohwa mumigwagwa?
Sangana naamai vaChris Rock, Rosalie Rock. Ndiye mhando yamai munhu wese yagara achishuvira kuve nayo.
Iwe haugone kufungidzira kutonhora kunoyerera nepakati pemusana waRosalie paanoona mwanakomana wake arohwa uye arohwa. Ehezve, iye anofanira kunge aida kudzokera kune avo vakonzeresa kunyunyuta kwemwanakomana wavo. Nekudaro, Rosalie akadzidzisa Chris kuti ataure nezve kusarongeka uye kwete kutsiva. Nekudaro, iye aifanira kudzora kutsamwa kwake uye kutsungirira kurwadziwa kwekuona mwana wake achitambura.
Nezve baba vaChris Rock:
MuAmerican comedian chiratidzo chemufananidzo wababa vake. Baba vaChris, Julius Rock, vakashanda semutyairi wemarori uye mupepanhau anounza kuti awane chouviri kumhuri yake. Nehurombo, akatambura neUlcer uye aifanirwa kuvhiyiwa kuitira kuti avezve noutano. Mushure mekuvhiyiwa kwake, Julius achiri kurasikirwa neupenyu kumaoko anotonhora erufu muna 1988.
Mufananidzo unokanda wababa vaChris Rock, Julius Rock. Iye weAmerica akareurura pasocial media kuti aive nababa vakanyanya.
Nezve hama dzaChris Rock:
Pakave pasina chaiwo manhamba akaunganidzwa nezve huwandu hwehama dzeChris nehanzvadzi. Nekudaro, kwakasiyana masosi akapa mhinduro dzakasiyana kumubvunzo pamusoro pehama dzaChris. Mamwe masosi anoburitsa pachena kuti Chris Rock ane vanin'ina vatatu uye mukoma munin'ina mukoma. Nepo mamwe manyuko akaburitsa kuti Chris Rock ane vanun'una vanomwe.
Rumbonera mumhuri yeAmerican comedian uye mugadziri wefirimu. Ona kuti hama dzese dzinoita senge dzakafanana.
Kubata ruzivo rwavo pamwechete, Chris Brothers vari; Charles, Tony, Jordan, Kenny, Andre, Brian, naAndi Rock. Nehurombo, mukoma-mukoma-mukoma, Charles Rock akafa muna 2006 mushure mekurwara nedipsomania. Vatatu vevanun'una vaChris vakatorawo mutsetse mumwe wehunyanzvi Chris Rock.
Izvo zvekuti muAmerican comedian uye mugadziri wemamuvhi asingataure zvakawanda nezvemhuri yake zvakabvisa ruzivo nezve babamunini vake, vanatete vazukuru, uye babamunini kubva munhau. Nekudaro, sekuru vake nasekuru vaive Mufundisi Allen Rock naMary Vance apo sekuru vake nasekuru naambuya vaive Wesley Tingman naPearl McClam.
Mhuri yaChris Rock Yemhuri Hupenyu Hwechokwadi:
Ichokwadi pasina mubvunzo kuti komedhi uye mukurumbira zvakakanganisa zvakanyanya hunhu hwaChris Rock. Yakawanda yeshamwari yake inobvuma kuti Chris ndiye anonyanya kuseka munhu waasati ambosangana naye. ven kunyangwe iyo celeb yeAmerica yawana mukurumbira, haatenderi kudada kutora chikamu chiri nani chake. Chinhu chinonakidza nezvehunhu hwake ndechekuti Chris anofara, anofara, uye anonakidza kuve naye.
Nehurombo, Chris wedu anoseka anonetsekana nekuda kwemhedzisiro yechiitiko chake chekutanga Hupenyu. Ndosaka achigara achitaura achipokana nekushoropodzwa uye kusarura. Sezvineiwo, chishuwo chikuru chemutambi wedu ane mukurumbira kuparadza rusaruro kubva pamusoro penyika ino.
Hupenyu hwaChris Rock Hwechokwadi:
Kurarama semuseki akasarudzika uye mutambi, Chris akaunganidza hupfumi hwakawanda kubva pane zvaaiita pabasa. Sezvineiwo, akainki zita rake pachinyorwa chevapfumi vakapfuma kwazvo pasirese. Chris Rock's Net Worth inofungidzirwa kunge iri mari inokwana yemamirioni zana emadhora.
Imba yaChris Rock neMota:
Mutambi wedu weBlack American haazvinyime zveumbozha. Chokwadi ndechekuti, anorarama hupenyu hwemafashoni. Kwemakore, Chris akatenga zvinhu zvakawanda zvinodhura zvinoenderana nechinzvimbo chake. Ane imba inosvika mamirioni matatu emadhora muAlpine, New Jersey. Uyezve, Chris ane mota yeMaserati inokosha madhora zviuru mazana maviri.
Imba yake youmbozha inokwana kusvika kune iye akapfuma Mararamiro.
Chris Rock's Untold Chokwadi:
kuputira yedu Chris Rock's Hupenyu Hupenyu Nyaya, heano mashoma mashoma-asingazivikanwe chokwadi ayo anogona kukubatsira iwe kuti unzwisise zvizere nezve rake Biography.
Chokwadi # 1: Mugadziri weTerevhizheni:
Ari kure nemamhanzi ake uye kuita kwake, Chris akafunga kuratidzira zvishoma zvematambudziko aakatambura kuchikoro. Nekudaro, akaburitsa komedhiyo akateedzera Wese Anovenga Chris. Iwo akateedzana akawana mukurumbira uye akaenderera mberi kumukunda iye maviri Emmy Awards pamwe nemamwe akakosha mazita uye mibairo.
Chokwadi # 2: Chris 'Asingadaviriki African Heritage:
Mugore ra2009, Chris 'wemuAfrica madzitateguru akaputswa zvakanyanya. Mune rimwe rebhuku raHenry Louis Gates Jr., akataura kuti Chris 'DNA ine 45% yemutambo weUpper Guinea (kureva Senegal neLiberia). Zvakare, Henry akasimbisa kuti 30% yeChris 'African DNA inowirirana neNigeria nepo 25% yasara ichienderana nedunhu reCongo-Angola. Naizvozvo, chizvarwa cheChris Rock chemuAfrica chinonyanya kuve chekuNigeria.
Chokwadi # 3: Charity yaChris Rock:
Kana zvasvika kune rudo uye hwaro hunotsigira, yedu nhema yeAmerican celeb haina kusiiwa kunze. Unoziva here kuti Chris akatsigira zvinopfuura gumi neshanu zvinobatsira uye hwaro kubva paakasimuka Mukurumbira? Kutaura mashoma, Chris akatsigira Angel Rock Project Artists yeNew South Africa, Champions for Children, uye Elevate Hope Foundation.
Wiki yaChris Rock:
Pazasi pane wiki ruzivo ruzivo rweChris Rock. Tafura yacho ichakubatsira iwe kuwana ruzivo nezvake muchidimbu uye zvine mutsindo. Tsvaga pazasi
Zita rizere: Christopher Julius Dombo
Nick Zita: Chris Rock
Zuva rekuzvarwa: 7th February 1965
Nzvimbo yekuzvarirwa: Andrews, South Carolina
Baba: Julius Dombo
Amai: Rosalie Rock
Vanun'una: Charles, Tony, Jordan, Kenny, Andre, Brian, naAndi Rock
Wawakaroora / ex-mukadzi: Malaak Compton-Dombo
Vana: Lola Simone naZahra Savannah
Net Worth: $ Miriyoni 100
Basa: Comedian, mutambi, muterevhizheni mugadziri, uye mugadziri wefirimu
Ethnicty: Afircan -America
kukwirira: 1.78m - mumita
5 ′ 10 ″ - nemakumbo
Zvinosuruvarisa kuti vazhinji veVatema vekuAmerican nevamwe vanhu vatema vanoverengeka vakapfuura nekushoropodzwa nekusarurwa. Chiyero icho ganda dema rave kunongedzerwa sehwaro hwedzinza rinotyisa.
Nekudaro, Chris Rock's Biography yatidzidzisa kuti kunyangwe vanhu vane ganda dema vanogona kuita chinzvimbo chiri nani mukugadzira nyika ive nzvimbo iri nani. Nekudaro, ngatiuyei tese tisangane toti AIHWA! kusarura nekusarura. Tinovimba iwe wakanakidzwa nekuverenga Yedu Chris Rock Hupenyu Nyaya.
Zvakare, inzwa wakasununguka Kubata Nesu kana iwe ukaona chero chinhu chinoita senge chisiri chakanaka muchinyorwa chino. Zvishoma zvandinokanganwa, Ndichiri kuisa Chris Bio, timu yedu yakave nechokwadi chekutarisa kurongeka uye kugona kuti ikupe iwe unoona muoni chiitiko chaunokodzera.